ILoon Apt ilala 2-4
I-Whale Watcher House inikezela ngokungaqhelekanga kwicala lolwandle, indawo yokuhlala ebekwe kakuhle, ngaphakathi kwemizuzu engama-40 yokuqhuba iSt. John's - eSt. Yenye yezindlu ezi-3 ezizimeleyo ezisecaleni kolwandle kule ndawo incinci yabahlali. Khangela iPuffin kunye neGannet kwindawo enye - zonke ngaphakathi kwi-Air BnB. Ukuhamba nabantu abongezelelweyo-iPuffin inokongezwa kwi-2-bedroom, i-2-igumbi lokuhlambela ukhetho - qhagamshelana nomninimzi ngeenkcukacha.
Eli ligumbi elimangalisayo elinamagumbi amabini elihlala kanye kumda wolwandle- elijongene neziqithi ezikwiWitless Bay Ecological Reserve.
I-Master Bedroom inebhedi enkulu, kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite eneshawari enkulu. Igumbi lokuhlala / indawo yekhitshi ibonelela ngeyona mbono ilungileyo kolu nxweme. Idesika enkulu ikhokelela ekuboneleleni ngokungaphaya kolwandle. Izinto eziluncedo ziquka:
Igumbi lokuhlala elinobukhulu bokumkanikazi likhupha ibhedi yesofa
Zonke izinto zelinen eziluncedo - iishiti kunye neetawuli - kubantu aba-4
Indawo yokutyela enetafile, izitulo ezi-4
Umgangatho obanzi ukusuka ekhitshini / indawo yokuhlala-ngaphandle kwezihlalo ezi-4
4.94 · Izimvo eziyi-82